ubuntu 8.04 မှာ jetaudio ကို ဘယ်လို install ရမလဲ ? - MYSTERY ZILLION
ubuntu 8.04 မှာ jetaudio ကို ဘယ်လို install ရမလဲ ?
ubuntu မှာ jetaudio software ကို install လုပ်ချင်လို ့ပါ။။။။။။။။။။။
ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ ဆိုတာပြောပြပေးကြပါဗျာ။။။။။။။။။။။
အာလုံးကို ကျေးဇ ူးတင်ပါတယ်
ဝမ်းနည်းစရာပဲဗျာ... Jet Audio က Linux အတွက်မထွက်ထားဘူး... Sound software တွေအများကြီးရှိပါတယ်.. ဘာအတွက်လဲ... jet audio မှ ဖြစ်မှာလား..
ကျေးဇ ူးပါ ကို စေတန်ရေ
ကျွန်တော် မသိလို ့ပါ..........
နောက် သိစရာလေတွေ ကိုပြောပြပါလား
လေ ့လာရအောင်ပေါ ့
ကျေးဇ ူး alot ပါ။။။။။။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ wine ဆိုတာလေးကို သွင်းပြီးတော့ ရနိုင်ပါတယ်... wine ဆိုတာကတော့ windows program တွေကို linux မှာရအောင် လုပ်တဲ့ package ပါ။
အကို ပြောတဲ့ wine ကဘယ်နေရာမှာ ရှာရမှာလဲ
ကျွန်တော် က နဲနဲ တုံး လိုပါ.........
wine ရှာပြီး ဘယ်လို run ရမယ်ဆိုတာလေးပါ ပြောပြနိုင်မလား
ကျေးဇ ူး alot ပါဗျာ......................:1::1::1:
ကျွန်တော်လည်း link တွေတစ်ခုမှ မမှတ်ထားဘူး.. သိချင်တာဆို google ကနေရှာမြဲပဲ...
အခု wine for ubuntu ဆိုပြီးရှာလိုက်
http://www.winehq.org/site/download-deb အဲမှာရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်.. တကယ်ရပါတယ်.. စမ်းပြီးပါပြီ